ဘိဘအူရှိမူလတန်းကျောင်းတာဝါ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
၁၉၁၀ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ မူလတန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းအဆေက်အဦးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ တဲ့ ( သုံးထောင့်ချွန်အမိုးတာဝါ ) က ခရီးသွားဧည့်သညတွေကြားမှာ လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ် ယခုလက်ရှိလည်း ကျောင်းအဆောက်အဦးအဖြစ် အသုံးပြုနေတဲ့အတွက် ကျောင်းတွင်းကို ဝင်ရောက်ခွင့် တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ နဲ့ လည်ပတ်ဖို့ က အပြည့်အဝ နားလည်မှု ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။
Hokkaidō Kamikawa-gun Biei-chō Bibaushi Minami2-2- 58
ကျောင်းအဆောက်အဦးကို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ က နွေဦးမှာ ဆောင်းဦးရဲ့ မြက်ပင်တွေ နဲ့ဆောင်းနှင်းရှုခင်းတွေနဲ့ အတူ ရိုက်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှ ရိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပင်တွေ များတာကြောင့် အပင်တွေနဲ့ ကွယ်နေရင်လည်း အေးအေးဆေးဆေး အနီးဝန်းကျင်ကို ပတ်သွားပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မယ့် နေရာကို ရှာကြရအောင်!
JR Furanoလိုင်း ( Bieiဘူတာ ) မှ အငှားကားဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် 
JR Furanoလိုင်း ( Bieiဘူတာ ) မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်
တောင်ကုန်းရှုမျှော်ခင်းနဲ့ ပန်းရှုခင်းတွေက လူကြိ...
လာဗန်ဒါပန်းများဖြင့် နာမည်ကြီးသော ခီတဟိုကိုင်းဒိ...
MacBook Proရဲ့ မျက်နှာပြင်ပုံအဖြစ် အသုံးပြုထားတဲ...
မြို့ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ဟိုခုဆဲခိတောင်အလယ်ပိုင်းမှ...
ရေတံခွန်ရေကျသည့်အမြင့် ၃၀ မီတာ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နြှာ...
နေမင်းကြီးကို မျက်နှာမူပြီး ပြုံးလိုက်ပါ! နွေရာသီရဲ့ ရာသီပေါ် နေကြာပင် ရဲ့ ရှုခင်းအလှ
သြဂုတ်လဝင်လာရင် အရမ်းပူတဲ့အပူချိန်မှာ အခန်းကထွက်ဖို့ တုံ့ ဆိုင်းနေလောက်အောင်ဖြစ်တာက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နွေရာသီပါ။ အလျှံညီးညီးနဲ့ အသားကို လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့နေရောင်မှာ လက်လျှော့ထားလိုက်ရပါတယ်။...